ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးနဲ့တွေ့ဆုံတိုင်းစိတ်မလုံမခြုံဖြစ်တတ်ကြတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုတာ – Trend.com.mm
Posted on May 27, 2018 May 23, 2018 by Shun Lei Phyo
မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တကယ်ကြီးချစ်မိသွားတဲ့အခါကိုယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူအပေါ် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွားပြီး သူတို့ရဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးကအစပြောပြတတ်တာမျိုး၊ အဖေလိုအစ်ကို လိုဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာအားကိုးတတ်တာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့ဆုံချိန်တိုင်းမှာစိတ်မလုံမခြုံဖြစ်ရတာတွေ စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင်တာ့ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်….
ကိုယ့်ချစ်သူဆီကလိုအပ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုအပြည့်အ၀မခံစားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ သူငါ့အပေါ်မှာတကယ်ရောချစ်လို့လားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အချိန်တိုင်းရှင်သန်နေတတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ ပါးစပ်ကနေချစ်ပါတယ် လို့ဆိုလာတဲ့အရာထက် လက်တွေ့ကျကျ
ချစ်ပြတတ်တာမျိုးကိုပိုသဘောကျတတ်ကြတာပါ။ ချစ်တယ်ခဏခဏပြောစရာမလိုပဲဘေးလူကတောင်သိသာစေတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့မှပျော်ရွှင်တတ်ကြတာမလို့ ဒီလိုအပြည့်အ၀ချစ်မေတ္တာကိုမခံစားရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သာချစ်နေရတယ်မပျော်ရပါဘူး။
မိန်းမဆိုတာမျိုးကတယ် သ၀န်တိုစိတ်များတာ သဘာဝပဲမဟုတ်ပါလား။ သူတို့ကလွဲလို့တစ်ခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ချီးကျူးသံတွေကြားနေရပြီဆိုရင်တော့ အလိုလိုစိတ်အားငယ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဲ့ကောင်လေးနားမှာ နေရတာစိတ်ညစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခြားမိန်းကလေးကိုချီးကျူးစကားတွေပြောသံကြားတိုင်းလည်းငါကသူ့လောက်တောင် အဖြစ်မရှိဘူးလားဆိုတဲ့ Depression မျိုးဝင်လာစေပြီး စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်စေပါတယ်။
မိန်းကလေးတိုင်းသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားတာကိုသဘောကျတတ်ကြတာကြီးပါပဲ ။ အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားဆီကနေ တန်ဖိုးထားကြင်နာမှုကိုပိုပြီးလိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုတန်ဖိုးလည်းအထားမခံရကြင်နာရကောင်းမှန်းလည်းမသိတဲ့ ချစ်သူနားမှာနေရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ကိုယ်သူတို့ တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ခံစားတတ်လာကြပြီး စိတ်ပင်ပန်းကျဉ်းကျပ်လာကြပါတယ်။
သူများအတွက်လှလှမလှလှ ကိုယ့်ချစ်သူအတွက်တော့လှချင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ချောတယ်လှတယ်ဆိုတဲ့ချီးကျူးစကားသံတွေတော်လိုက်တာ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတဲ့တီတီတာတာစကားလုံးတွေကို မကြားရတဲ့မိန်းကလေးဟာ အချစ်ဆိုတာကိုဘာကြီးမှန်းတောင်သိပ်မခံစားတတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်သူရှေ့ရောက်တိုင်းသူများကဲ့ရဲ့မလာငါဒီလိုဝတ်ရင် သူများကြိုက်ပါ့မလားငါဒီလိုစားရင် စသည်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းပါးလာပြီး စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
အတ္တကြီးတဲ့ယောင်္ကျားလေးနားမှာဘယ်မိန်းကလေးမှမနေပျော်ပါဘူး အနေကျဉ်းကျပ်ပြီး ဘာလုပ်လုပ်သူအပြစ်ပဲပြောမှာပဲလို့တွေးတောနေတတ်ပြီး တစ်ခုခုပြောရမှာ တစ်ခုခု လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တောင်အသိပေးဖို့ခက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနားလည်မှုမရှိပဲ အတ္တကြီးလွန်းတဲ့ယောင်္ကျားလေးတွေနားမှာနေရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ အလိုလိုစိတ်မအေးချမ်းဖြစ်စေပါတယ်။
ဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေဟာ ဒီလိုကောင်လေးတွေနားမှာချစ်သူအဖြစ်နေရတာဟာ ချစ်သာချစ်နေရတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိစိတ်လုံခြုံအေးမြမှုမရှိတာတွေဖြစ်စေနိုင်တာမလို့ ဒီလိုစိတ်ညစ်ခံနေမဲ့အစား ကိုယ့်ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ သူတွေနားသာရှင်သန်ရင်းအချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…
မိနျးကလေးတှတေျောတျောမြားမြားဟာ တဈစုံတဈယောကျနဲ့တကယျကွီးခဈြမိသှားတဲ့အခါကိုယျခဈြတဲ့ခဈြသူအပျေါ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျသှားပွီး သူတို့ရဲ့ကိစ်စသေးသေးလေးကအစပွောပွတတျတာမြိုး၊ အဖလေိုအဈကို လိုဂုဏျယူဝံ့ကွှားစှာအားကိုးတတျတာမြိုးတှေ လုပျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုမဟုတျပဲ ကောငျမလေးတဈယောကျကသူ့ကောငျလေးနဲ့တှဆေုံ့ခြိနျတိုငျးမှာစိတျမလုံမခွုံဖွဈရတာတှေ စိတျကဉျြးကပျြနရေတာမြိုးတှကွေုံတှနေ့ရေပွီဆိုရငျတာ့ ဒီလိုဖွဈရတဲ့အကွောငျးရငျးကဘာတှလေဲဆိုတာကွညျ့ရအောငျ….
ကိုယျ့ခဈြသူဆီကလိုအပျတဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုအပွညျ့အဝမခံစားရတဲ့ မိနျးကလေးတှဟော သူငါ့အပျေါမှာတကယျရောခဈြလို့လားဆိုတဲ့စိတျနဲ့အခြိနျတိုငျးရှငျသနျနတေတျကွပါတယျ။ မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားဟာ ပါးစပျကနခေဈြပါတယျ လို့ဆိုလာတဲ့အရာထကျ လကျတှကေ့ကြ
ခဈြပွတတျတာမြိုးကိုပိုသဘောကတြတျကွတာပါ။ ခဈြတယျခဏခဏပွောစရာမလိုပဲဘေးလူကတောငျသိသာစတေဲ့အခဈြမြိုးနဲ့မှပြျောရှငျတတျကွတာမလို့ ဒီလိုအပွညျ့အဝခဈြမတ်ေတာကိုမခံစားရတဲ့မိနျးကလေးတှဟော ခဈြသာခဈြနရေတယျမပြျောရပါဘူး။
မိနျးမဆိုတာမြိုးကတယျ သဝနျတိုစိတျမြားတာ သဘာဝပဲမဟုတျပါလား။ သူတို့ကလှဲလို့တဈခွားမိနျးကလေးတဈယောကျကိုတဈခါလညျးမဟုတျနှဈခါလညျးမဟုတျခြီးကြူးသံတှကွေားနရေပွီဆိုရငျတော့ အလိုလိုစိတျအားငယျစိတျတှဖွေဈပျေါလာပွီး အဲ့ကောငျလေးနားမှာ နရေတာစိတျညဈလာတတျကွပါတယျ။ တဈခွားမိနျးကလေးကိုခြီးကြူးစကားတှပွေောသံကွားတိုငျးလညျးငါကသူ့လောကျတောငျ အဖွဈမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ Depression မြိုးဝငျလာစပွေီး စိတျမလုံမခွုံဖွဈစပေါတယျ။
မိနျးကလေးတိုငျးသူတို့ကိုတနျဖိုးထားတာကိုသဘောကတြတျကွတာကွီးပါပဲ ။ အထူးသဖွငျ့ကိုယျ့ခဈြသူရညျးစားဆီကနေ တနျဖိုးထားကွငျနာမှုကိုပိုပွီးလိုခငျြတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုတနျဖိုးလညျးအထားမခံရကွငျနာရကောငျးမှနျးလညျးမသိတဲ့ ခဈြသူနားမှာနရေတဲ့မိနျးကလေးတှဟော အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှသူတို့ကိုယျသူတို့ တနျဖိုးမရှိဘူးလို့ခံစားတတျလာကွပွီး စိတျပငျပနျးကဉျြးကပျြလာကွပါတယျ။
သူမြားအတှကျလှလှမလှလှ ကိုယျ့ခဈြသူအတှကျတော့လှခငျြကွတဲ့သူတှကွေီးပါပဲ။ ကိုယျ့ခဈြသူကောငျလေးရဲ့ခြောတယျလှတယျဆိုတဲ့ခြီးကြူးစကားသံတှတေျောလိုကျတာ ခဈြစရာကောငျးလိုကျတာလို့ပွောတဲ့တီတီတာတာစကားလုံးတှကေို မကွားရတဲ့မိနျးကလေးဟာ အခဈြဆိုတာကိုဘာကွီးမှနျးတောငျသိပျမခံစားတတျတော့ပါဘူး။ ကိုယျခဈြသူရှရေ့ောကျတိုငျးသူမြားကဲ့ရဲ့မလာငါဒီလိုဝတျရငျ သူမြားကွိုကျပါ့မလားငါဒီလိုစားရငျ စသညျဖွငျ့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုနညျးပါးလာပွီး စိတျမလုံမခွုံဖွဈတတျကွပါတယျ။
အတ်တကွီးတဲ့ယောကငြ်ျားလေးနားမှာဘယျမိနျးကလေးမှမနပြေျောပါဘူး အနကေဉျြးကပျြပွီး ဘာလုပျလုပျသူအပွဈပဲပွောမှာပဲလို့တှေးတောနတေတျပွီး တဈခုခုပွောရမှာ တဈခုခု လုပျရမယျဆိုရငျတောငျအသိပေးဖို့ခကျကွောကျကွောကျဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒီလိုနားလညျမှုမရှိပဲ အတ်တကွီးလှနျးတဲ့ယောကငြ်ျားလေးတှနေားမှာနရေတဲ့မိနျးကလေးတှဟော အလိုလိုစိတျမအေးခမျြးဖွဈစပေါတယျ။
ဆိုတော့ မိနျးကလေးတှဟော ဒီလိုကောငျလေးတှနေားမှာခဈြသူအဖွဈနရေတာဟာ ခဈြသာခဈြနရေတယျစိတျပြျောရှငျမှုမရှိစိတျလုံခွုံအေးမွမှုမရှိတာတှဖွေဈစနေိုငျတာမလို့ ဒီလိုစိတျညဈခံနမေဲ့အစား ကိုယျ့ကိုယျလိုအပျတဲ့ သူတှနေားသာရှငျသနျရငျးအခြိနျတှကေိုကုနျဆုံးနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ…
အတွင်းခံနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒါလေးတွေတော့ သိထားသင့်ပါတယ်.. မိန်းကလေးမှန်ရင်ပေါ့